गृहमन्त्री थापाको दावी: भक्तपुर 'इन्काउन्टर' फेक होइन (भिडियोसहित), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
गृहमन्त्री थापाको दावी: भक्तपुर 'इन्काउन्टर' फेक होइन (भिडियोसहित)
डिसी नेपाल , २५ श्रावण २०७५
चितवन। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बालक निशान खड्कालाई अपहरण गरी हत्या गर्नेहरु इकाउन्टरमै मारिएको दावी गरेका छन्। शुक्रबार बिहान भरतपुर विमानस्थलमा स्थानीय संचारकर्मीहरुले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले यस्तो दावी गरेका हुन्।
उनले २४ घण्टा भित्रै अपहरणकारीहरुलाई निष्तेज पार्न सरकार सफल भएको दावी समेत गरे। साथै उनले फेक इन्काउन्टर हल्ला मात्रै भएको बताए। गत सोमबार सुर्यविनायकको वडा नं. ८ स्थित गणेशमन्दिर नजिकै रहेको जंगलमा प्रहरीको गोली लागि अजय तामाङ र गोपाल तामाङको मृत्यु भएको थियो।
प्रहरीले उनीहरु इन्काउन्टरमै मारिएको दावी गर्दै आएको छ। तर स्थानीयहरुले भने इन्काउन्टरमा मारिएको भन्ने कुरा फेक भएको बताएका छन्। गृहमन्त्री थापाले बिहीबार इन्काउन्टरबारे छानविन हुने बताएका थिए।
'प्रकाण्ड अपराधी हुन्'
यस्तै गृहमन्त्री थापाले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड) अपराधी भएकाले पक्राउ गर्नु परेको स्पष्टिकरण दिएका छन्।
गृहमन्त्री थापाले चन्दा आतंक र राज्यविरुद्ध ध्वंसात्मक गतिविधिजस्ता गैरकानुनी काम गरेकाले सरकारले प्रकाण्डलाई पक्राउ गरी कानुनी कार्वाही सुरु गरेको प्रष्टयाएका हुन्। उनले सरकारले गैरकानुनी क्रियाकलापमा संलग्न जोकोही पनि कार्वाही गर्ने चेतावनी समेत दिए।
संचारकर्मीहरुले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री थापाले ध्वंसात्मक गतिविधिमा संलग्न चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग सरकारले वार्ता र कार्वाही एकैसाथ अघि बढाउने नीति लिएको पनि स्पष्ट पारे।